ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ခြံ ၊ မြေကွက် ရောင်းရန် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် -့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ပေ၂၀ပေ၆၀မြေသီးသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၂၀*၆၀ မြေသီးသန့်ကို ၁၉၅သိန်းဖြင့်ရောင်းမည်။ အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်း လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့…...
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၂၀*၆၀ မြေသီးသန့်ကို ၁၉၅သိန်းဖြင့်ရောင်းမည်။ အောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်း လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့…
Listed 21 August 2019
Tat Nay Win Real Estate
Advertiser : Tat Nay Win Real Estate
Property ID: S-1204383
Office no : 09 448025742, 09 268858885
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေသီးသန့်အမြန်ရောင်းမည်။09977901503
ဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည် (42)ရပ်ကွက် ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး (40*60)ပေ အုတ်ခတ် ဂရန်...
ဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည် (42)ရပ်ကွက် ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး (40*60)ပေ အုတ်ခတ် ဂရန်
Property ID: S-1198326
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည် (40*60)ပေ ဂရန် ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး ၄၂ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည် (40*60)ပေ ဂရန် ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး ၄၂ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။
Property ID: S-1198316
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြိူ့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ 7/8 လမ်းဆုံ အနီး၊ပေ (40×60)…
Listed 10 July 2019
Khaing Myat Wai
Advertiser : Khaing Myat Wai
Property ID: S-1200288
Mobile : 09780985600
Office no : 0943057708
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ( ၅၀) ရက်ကွက်၊ ဗေဒါလမ်း၊ပြည်ထောင်စုလမ်းင်္ကြီးကျော်ကပ်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်တစ်လုံးပါ၊…
Property ID: S-1185307
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း (၄၉) ရပ်ကွက် ဒူယား (၅) လမ်း ၊ရပ်ကွက်သန့်…
Listed 15 June 2019
Property ID: S-1185304
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက် နေရာတွင်…
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၉)ရပ်ကွက် မြေကွက်အကျယ် - 40'x60 (2)ကွက်တွဲ မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ ရာဇဓိရာဇ် လမ်းမကျော ကပ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက်…...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၉)ရပ်ကွက် မြေကွက်အကျယ် - 40'x60 (2)ကွက်တွဲ မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ ရာဇဓိရာဇ် လမ်းမကျော ကပ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမဒဲ့ပေါက်…
Listed 25 August 2019
Wint Htae War General…
Advertiser : Wint Htae War General…
Property ID: S-1204229
Office no : 09 404077749
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ ၃၈ ရပ်ကွက်ရှိမြေကွက်ရောင်းမည်
မြောက်ဒဂုံ ၃၈ ရပ်ကွက် အုတ်ခတ်မြေဖို့ပြီး ဂရန်အမည်ပေါက်...
မြောက်ဒဂုံ ၃၈ ရပ်ကွက် အုတ်ခတ်မြေဖို့ပြီး ဂရန်အမည်ပေါက်
Listed 22 August 2019
Property ID: S-1203770
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက် မြေသီးသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက် ၄၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ။ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…...
မြောက်ဒဂုံ ၅၀ ရပ်ကွက် ၄၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ။ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…
Property ID: S-1204431
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ၄၉ ရပ်ကွက်တွင် မြေသီးသန့် ရောင်းရန်ရှိသည်
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၄၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…...
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၄၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…
Property ID: S-1204420
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ ၄၉ရပ်ကွက်တွင် မြေသီးသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၂၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…...
မြောက်ဒဂုံ ၄၉ ရပ်ကွက် ၂၀*၆၀ မြေသီးသန့် အရောင်း ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးဖြစ်လို့ ကားအဝင်အထွက်ကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ။…
Property ID: S-1204419
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံ(၃၄)ရပ်ကွက် နေရာကောင်း ဈေးတန် မြေကွက်အရောင်း။(Code-201.5)
တည်နေရာ အနေအထား- မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊(34)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းမအနီး၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကျောကပ် အကျယ်အ၀န်း -40'x60' မြေအမျိုးအစား…...
တည်နေရာ အနေအထား- မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊(34)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းမအနီး၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကျောကပ် အကျယ်အ၀န်း -40'x60' မြေအမျိုးအစား…
Property ID: S-1204335
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်(၄၅)ရပ်ကွက် ဈေးတန်ဂရန်မြေကွက်ကျယ်ရောင်းမည်။(Code-32.4)
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ခိုင်ရွှေဝါလမ်း အကျယ်အ၀န်း - 40'x60' မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ မိသားစုအေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အိမ်…...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄၅)ရပ်ကွက်၊ခိုင်ရွှေဝါလမ်း အကျယ်အ၀န်း - 40'x60' မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ မိသားစုအေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အိမ်…
Listed 16 August 2019
Property ID: S-1203778
ရောင်းရန် - ##မြောက်ဒဂုံ ဦးဝိစာရလမ်းမပေါ်တွင် နေရာကောင်း ထောင့်ကွက်…
Listed 10 August 2019
Advertiser : Min Mahar
Property ID: S-1203989
Asking Price : 5,400 သိန်း
Mobile : 09 422477773, 09 404477622
Office no : 09 250636123
ရောင်းရန် - 40x60 Land ပင်လုံလမ်းမကြီး ကျောကပ် 34 VIP သစ်တောရပ်ကွက်
မြောက်ဒဂုံ သစ်တောရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီးကျောကပ်၊ သင်းဝင်လမ်းဂုတ်ခြံ၊ ပျဉ်းမမြိုင်လမ်းပေါ်၊ Capital Supermarket အနီး၊ အမည်ပေါက်…...
မြောက်ဒဂုံ သစ်တောရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီးကျောကပ်၊ သင်းဝင်လမ်းဂုတ်ခြံ၊ ပျဉ်းမမြိုင်လမ်းပေါ်၊ Capital Supermarket အနီး၊ အမည်ပေါက်…
Listed4August 2019
Advertiser : Mya Mya San
Pyin Ma Myaing Street
Property ID: S-1190034
Office no : 095146528
ရောင်းရန် - 40x60 Land မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမ ဂုတ်ခြံ၊
Property ID: S-1196033
အကျယ်​အ၀န်း ၆၀ x ၈၀။ ​မြေကွက်​။...
အကျယ်​အ၀န်း ၆၀ x ၈၀။ ​မြေကွက်​။
Property ID: S-1203677
ရောင်းရန် - 29-Ward(၂၉ ရပ်ကွက်)
*Location – 29-Ward , North Dagon Town ship. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Land *Area — 2400 sqft...
*Location – 29-Ward , North Dagon Town ship. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Land *Area — 2400 sqft
29-ward (၂၉ ရပ်ကွက်)
Property ID: S-1203659
ရောင်းရန် - 32-Ward(၃၂ရပ်ကွက်)
*Location – 32-Ward , North Dagon Town ship. *Price – 1300 Lakhs *Property Type — Land *Area — 2400 sqft...
*Location – 32-Ward , North Dagon Town ship. *Price – 1300 Lakhs *Property Type — Land *Area — 2400 sqft
Listed 1 August 2019
U Kyin Ou Street (ဦးကြင်ဥလမ်း)
Property ID: S-1203610
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဗဟန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဗိုလ်တထောင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကိုကိုးကျွန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒလရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဒေါပုံရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
လှိုင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွလှိုင်သာယာရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွလှည်းကူးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမှော်ဘီရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွထန်းတပင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွအင်းစိန်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကမာရွတ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကော့မှုးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွခရမ်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကွမ်းခြံကုန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကျောက်တံတားရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကျောက်တန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွလမ်းမတော်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွလသာရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမရမ်းကုန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမင်္ဂလာဒုံရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမြောက်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွပန်းပဲတန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွပုဇွန်တောင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွစမ်းချောင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဆိပ်ကြီးခနောင်တိုရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ရွှေပြည်သာရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွတောင်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွတိုက်ကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွတာမွေရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွသာကေတရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွသံလျင်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွသင်္ဃန်းကျွန်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွသုံးခွရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွတွံတေးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွရန်ကင်းရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွရွှေပေါက်ကံရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွနေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွ
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
land, for sale in Dagon Myothit(North) , Yangon